Faalo: Ra’iisul Wasaare Saacid oo ay haysato labo daran mid dooro – idalenews.com
Faalo: Ra’iisul Wasaare Saacid oo ay haysato labo daran mid dooro
Tan iyo markii lamagacaabay R/wasaaraha xukuumada federlaaka Soomaaliya, Abdi faarax Shirdoon, oo baarlamaanku ay ku ansixiyeen aqlabiyad aan horay loo arag ayaa waxaa soo baxayay caqabado laba ah oo saameyn kara mustaqbalka Shaqo ee R/wasaaraha, arintaas oo la xariirta soo xulista golihiisa wasiirada.
lama saadaalin karto Mustaqbalka R/Wasaare Saacid , hasa yeeshee waxa uu kala dooranaa in uu sii shaqeeyo isaga oo caqabad dhibkeed leh xagga madaxweynaha ka heysato iyo in uu shaqadiisaba waayo oo ah biya shubka Caqabada madaxweynaha xilligan ka heysata, sida dad xog ogaal ah ay ku waramayaan.
Dadka arrinta sida aad ka ah ula socda ayaa waxa ay sheegayaan in maadaama madaxweynuhu xilka uusan ka qaadi Karin xilka uu doonayo si dadban uu uga qaado ka dibna uu keeno R/wasaare ka socda xisbiga uu aasaasaha madaxweynuhu ka yahay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu isagu doonayaa R/wasaraha in uu u meeeriyo waxa uu isaga rabitaankiisu yahay isaga oo aan eegeyn dhibka ka danbeyn kara oo bulashada iyo baarlamaanka oo shacabka metela uga imaanaya R/wasaaraha iyo xukuumadiisa, waxaana uu sanka ka gelinayaa in uu dhiso xukuumad 10 wasiir ka kooban.
Xukuumadaas tobanka wasiir ka kooban hadii uu dhiso R/wasaaraha shaki kuma jiro in baarlamaanku diidayo oo ay kalsoonida weyneyso, maxaa yeelay baarlamanku waxa uu ku dhisanyahay awood qeybsi, qabiilkii liiska 10ka ka waayo xildhibaanadiisu uma codeynayaan xukuumad aysan kadhex muuqan, waxaana meeshaas ka dhalanaya in R/wasaare Saacid xukuumadii uu bisha ku maqnaa daadku qaado, iyada oo ay meesha wali u taalo caqabadii M/weynuhu uu uga doonaya 10 wasiir.
R/wasaaraha waxa uu ku dhiiran karaa in uu iska diido liiska loo yeerinayo ee uu xukuumadiisa soo dhiso isaga oo aan qabiilna ku xad gudbeyn si uu u helo kalsonida baarlamaanka xukuumadiisuna u noqoto mid qabaa iladda dhan ay raalli ka yihiin, markaasna waxaa meesha ka bixi doona isku dhawansho ay yeeshan isaga iyo madaxweynaha.
Arrinta labaad ayaa ah in uu madaxweynaha taabici u noqdo oo uu soo dhiso xukuumada liiskeeda madaxweynuhu gacanta ku hayo ee 10-ka wasiir ah ka dibna baarlamaanku ku soo celiyo taas oo ugu danbeynta gaarsiineysa in ra’iisul wasaare Saacid dhaco oo booskaas la keeno nin ka tirsan xisbiga PDP oo sida lasheegay Xassan Sheekh Maxamuud u hadaba u sii gogol xaarayo.
Ninkaas oo lagu magacaabo DOODISHO waxaa wararku sheegayaan in goor hore ladoonayay in lamagacaabo hasa yeeshee si shacabka iyo Beesha Caalamka indhahooda leesaga jeediyo Saacid la keenay iyada oo danta laga lahaa aysan aheyn in uu shaqeeyo laakiin la fashiliyo si ruuxii diyaarsanaa durbadiiba loogu soo bedelo.
Xildhibaanno arrinta sheeda kala socda ayaa waxa ay sheegeen in arintu kaweyntahay wasiirra leesku heesto ee ay taagantahay kursiga Saacid, hadii ay arintaan meesha looga saarayo R/wasaare Abdi Faarax Shirdoon (Saacid) ay dhab noqotana waxa uu noqon doonaa R/wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya isaga oo aan wax shaqo ah dalka u qaban xilkiisa waaya.
W/D: Maxamed Banaadiri
Dib u dhac mar kale ku yimid magacaabista Golaha Wasiirada
Howlgalo dad lagu soo qabqabtey oo ka dhacey Kismaayo